Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu la shaqeyn doono dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka - BBC News Somali
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu la shaqeyn doono dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka
27 Jannaayo 2019
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalkaba.
Hadalkan ayuu madaxweynuhu ka sheegay xafladdii caleema saarka ee madaxweynaha cusub ee Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa yimid kaddib codsi uu madaxda goboleedyada iyo kuwa federaalka Soomaaliya ujeediyay, Islaan Ciise Islaan Maxamed, kaas oo ahaa in ay iscafiyaan wadashaqeeyaanna.
Mr Farmaajo ayaa sheegay in isagoo tixgalinaya codsiga Islaan Ciise Islaan Maxamed inuu cafiyay dadkii ay is-hayeen sidoo kalana uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan madaxda dalka.
Shirka Kismaayo muxuu soo if bixiyey oo kaa qarsoonaa?
Maxaa la isaga dhega-tirayaa shirarka uu Farmaajo ku baaqay?
Mr Farmaajo ayaa yiri "Anigaa ugu horreeya oo waxaan leeyahay waan idin cafiyay idinkana waxaan rabaa inaad I cafisaan."
Intaas kuma uusan hakan ee waxa uu ballanqaaday inuu ka shaqeyn doono xallinta khilaafaadka gudaha "Waxaan ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu Ilaah yiraahdo."
"Bacdamaa aan ahay odaygii u dhaxeeyayna, anigaa dhexgalaaya oo howlahooda xallinaaya, hadduu Ilaahay yiraahdo." Ayuu yiri.
Mr Farmaajo ayaa sheegay in dalka uu u baahan yahay mucaarad hasayeeshe waxa uu su'aal galiyay mucaaradkaasi nooca uu yahay "Mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxaa weeye markii ay xaaladda kulushay in mucaaradkaas uusan dowlado shisheeye la jirin, oo waxkasta oo ay tahay in dowladdiisa uu ag taagan yahay."
Image caption Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee Puntland
Intii ay socotay xafladda lagu caleema saarayay madaxweynaha cusub ee Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani ayaa Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ku hadlayay afka madaxda dhaqanka ee Puntland waxa uu ka codsaday siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliya inay u heshiiyaan sidii ay dalka dhibaatada uga saari lahaayeen.
Waxa uu Islaanku ka hadlay xalaadda madaxda xafladdaas joogtay "Umad badan baa caawa meeshan isugu timi in istaqaan iyo in aanan is aqoon, in wadahadasha iyo in aan wadahadlin, in isku faraxsan iyo in aan isku faraxsanayn."
Waxa uu Islaanku sheegay in sida kaliya ee khilaafka looga gudbi karo ay tahay in marka hore khilaafka la xalliyo horayna loo wada dhaqaaqo "Caawa madashan waa lagu dhan yahay, oo garta aan caawa halkan ku galayaa waxa ay tahay, salaaddii waxa aynu meeshan kaga tagaynaa ama caawa kaga dheelmanaynaa wax dhacayba xalay dhalay aynu ka ahaanno."
Codsiga Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa waxaa soo dhaweeyay madaxda gobollada iyo kuwa federaalka ee Soomaaliya, iyadoo madaxda maamul goboleedyada ay dhankooda sheegeen inay diyaar u yihiin in la iscafiyo oo la wadashaqeeyo, si looga guul gaaro dib u dhiska dalka.
Image caption Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wada shaqeeyo dadkuna ay iscafiyaan "Dhammaanteen aan iscafinno marka hore, marka labaadna Ilaahay towfiiqda hana waafajiyo, midnimo Soomaaliyeed ayaanan Ilaahay ka baryeynaa."
Mr Xaaf ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay arrimaha u gaarka ah Puntland iyo Galmudug waxa uuna sheegay inuu si dhaw kala shaqeyn doono maamulka cusub sidii loo sii wadi lahaa howsha socotay "Waa inaan howlaheennii horay u sii wadanno, nabaddii inaan horay u sii wadanno, waxaan rajaynayaa inaan halkan inta baabuur ka qaadanno ama Boosaaso ka soo qaadanno aan ilaa Dhuusamareeb ilaa Matabaan tagno ayaan Ilaahay ka rajaynayaa, haddana way dhawdhaw dahay waana la mari karaa, horayna waan u soo marnay haddana waan mari karnaa."
Image caption Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa isna waxa uu sheegay inay qaadanayaan talo soo jeedinta Islaan Ciise Islaan Maxamed waxa uuna sheegay "Aan garanno waddanka aan xukunnaa midka uu yahay, aan garanno boogaha shacabkeenna ay leeyihiin, aan garanno taariikhda waxa aan uga tagayno, taas ayaa waxa ay inoo tahay mid rasmi oo warkii Islaan Ciise daboolaya oo isku waxaynaya."
Axmed Madoobe ayaa ka talo bixiyay sida Soomaaliya horay loogu dhaqaajin karo "Waxay Soomaaliya ku socon kartaa wadatashi, isqancin, istixgelin, is ixtiraam."